Ny vaksiny Pfizer-BioNTech COVID-19 nankatoavina ho an'ny ankizy 5-11 ho an'ny hamehana
Home » Lahatsoratra farany farany » Tsindrio eto raha ity ny fanambaranao an-gazety! » Ny vaksiny Pfizer-BioNTech COVID-19 nankatoavina ho an'ny ankizy 5-11 ho an'ny hamehana
Androany, ny US Food and Drug Administration dia nanome alalana ny fampiasana maika ny Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine ho fisorohana ny COVID-19 mba hampidirana ankizy 5 ka hatramin'ny 11 taona. Ny fanomezan-dàlana dia nifototra tamin'ny fanombanana feno sy mangarahara nataon'ny FDA momba ny angon-drakitra izay nahitana ny fandraisan'anjaran'ireo manam-pahaizana manokana momba ny komity mpanolo-tsaina tsy miankina izay nifidy fatratra ny hanomezana ny vaksiny ho an'ny ankizy amin'ity sokajin-taona ity.
Hevi-dehibe ho an'ny ray aman-dreny sy ny mpikarakara:
• Fahombiazana: Ny fihetsiky ny zaza 5 ka hatramin'ny 11 taona dia mitovy amin'ny an'ny olona 16 ka hatramin'ny 25 taona. Tao anatin'io fanadihadiana io, ny vaksiny dia nandaitra 90.7% tamin'ny fisorohana ny COVID-19 amin'ny ankizy 5 ka hatramin'ny 11 taona.
• Fiarovana: Ny fiarovana ny vaksiny dia nodinihina tamin'ny ankizy 3,100 ka hatramin'ny 5 taona teo ho eo 11 izay nahazo ny vaksiny ary tsy nisy voka-dratsiny lehibe hita tamin'ny fandalinana mitohy.
• Hivory amin'ny herinandro ho avy ny Komity Mpanolo-tsaina momba ny Fanaraha-maso sy ny Fisorohana ny aretina (CDC) amin'ny herinandro ho avy mba hiresaka momba ny tolo-kevitry ny klinika fanampiny.
“Amin’ny maha-reny sy mpitsabo ahy, dia fantatro fa niandry ny fanomezan-dalana androany ny ray aman-dreny, ny mpikarakara, ny mpiasan’ny sekoly ary ny ankizy. Ny fanaovana vaksiny ny ankizy kely amin'ny COVID-19 dia hitondra antsika akaiky kokoa hiverina amin'ny fahatsapana ara-dalàna, ”hoy ny mpisolovava mpisolo toerana FDA Janet Woodcock, MD. fa ity vaksiny ity dia mahafeno ny fenitra avo anay. ”
Ny vakisiny Pfizer-BioNTech COVID-19 ho an'ny ankizy 5 ka hatramin'ny 11 taona dia apetraka amin'ny andiany voalohany amin'ny dosie roa, misaraka 3 herinandro, saingy fatra ambany kokoa (10 micrograms) noho ny ampiasaina amin'ny olona 12 taona no ho miakatra. (30 micrograms).
Any Etazonia, ny tranga COVID-19 amin'ny ankizy 5 ka hatramin'ny 11 taona dia mahatratra 39% amin'ny tranga amin'ny olona latsaky ny 18 taona. Araka ny CDC, manodidina ny 8,300 eo ho eo ny tranga COVID-19 amin'ny ankizy 5 ka hatramin'ny 11 taona no nitarika hopitaly. Tamin'ny 17 oktobra, 691 no maty noho ny COVID-19 tany Etazonia tamin'ny olona latsaky ny 18 taona, ary 146 no maty tamin'ny sokajin-taona 5 ka hatramin'ny 11 taona.
"Ny FDA dia manolo-tena handray fanapahan-kevitra izay tarihin'ny siansa izay azon'ny vondrom-piarahamonina sy ny fahasalamana azo itokisana. Matoky izahay ny fiarovana, ny fahombiazany ary ny angon-drakitra momba ny famokarana ao ambadik'io fanomezan-dàlana io. Ao anatin'ny fanoloran-tenanay amin'ny mangarahara manodidina ny fanapahan-kevitray, izay nahitana ny fivorian'ny komity mpanolo-tsaina ho an'ny daholobe tamin'ny fiandohan'ity herinandro ity, dia nandefa antontan-taratasy izahay androany izay manohana ny fanapahan-kevitray ary ny fampahalalana fanampiny momba ny fanombanana ny angon-drakitra dia havoaka tsy ho ela. Manantena izahay fa ity fampahalalana ity dia manampy amin'ny fananganana fahatokisan'ny ray aman-dreny izay manapa-kevitra raha hanao vaksiny ny zanany," hoy i Peter Marks, MD, Ph.D., talen'ny Ivotoerana momba ny fanombanana sy fikarohana momba ny biolojika ao amin'ny FDA.
Ny FDA dia nanapa-kevitra fa ity vaksiny Pfizer ity dia mahafeno ny fepetra fahazoan-dàlana hampiasa maika. Mifototra amin'ny fitambaran'ny porofo ara-tsiansa misy, ny tombony fantatra sy mety ho azon'ny vaksiny Pfizer-BioNTech COVID-19 amin'ny olona latsaky ny 5 taona dia mihoatra ny risika fantatra sy mety hitranga.